Induction Hot Forming Titanium Rod Ne RF Kuchengetedza System
musha / Applications / Induction Forging / Induction Kupisa Kuumba Titanium Tsvimbo
Category: Induction Forging Tags: inopisa yekugadzira tsvimbo, kupisa kugadzira titanium tsvimbo, induction inopisa kugadzira, induction hot forming furnace, induction inopisa yekugadzira muchina, induction inopisa yekugadzira tsvimbo
Induction Hot Forming Titanium Rod NeRF Induction Heating Equipment
Chinangwa Kupisa titanium tsvimbo kusvika 1700 ° F (926.7 ° C) mukati memasekondi makumi matanhatu ekupisa kuumba.
Material Titanium tsvimbo, 1.25 "(31.8mm) mamita, 5" (127mm) kureba
Kupisa 1700 ° F (926.7 ° C)
Zvishandiso • DW-HF-60kW kupisa induction system, ine musoro webasa uri kure.
Maitiro A akanyatsogadzirirwa gumi nematatu-kutendeuka helical induction coil inoshandiswa kupisa iyo titanium tsvimbo kusvika 1700ºF (926.7 ° C). Maipirometre maviri ekuona anoshandiswa kuyera tembiricha iri pamusoro nepakati pechikamu. Ose ari maviri epakati nepakati petani yetiyani anopisa kusvika 1700FF (926.7 ° C) mukati memasekondi makumi matanhatu.
• Kuvandudzwa kwema mechanical properties